Momba anay - Shenzhen Eyin Technology Co., Ltd.
Shenzhen Eyin Technology co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2008, orinasan-tseraseran'ny Sound bar any Shenzhen, Sina. Manana mpiasa mihoatra ny 100 izahay, manodidina ny 5000 metatra toradroa ny habaka famokarana.
Izahay dia mifantoka amin'ny famolavolana, famolavolana ary famokarana Sound bar, mpandahateny haino aman-jery ary mpandahateny mini. Ny elanelam-pahefana vokatra RMS dia 5W ka hatramin'ny 200W no ho miakatra. Ny vokatray dia CE, REACH ROHS, LVD & EMC, ERP, FCC, KC, BQB voamarina ary ny orinasanay dia voamarina ISO sy BSCI.
Manana atrikasa mahazatra izahay, ny fitaovana mandroso rehetra, ny ekipa R&D matihanina ary ny rafitra fanaraha-maso kalitao tsara mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra sy ny fandefasana haingana. Ankoatr'izay, manohy mivoatra ny vokatra tokana, lamaody ary mifaninana izahay, hisy modely vaovao 5 na 6 ho an'ny tsena manerantany.
Hatramin'ny nijoroana dia napetrakay hatrany amin'ny kalitao lehibe indrindra ny kalitao sy ny lazany hitarika antsika handroso. manome vokatra avo lenta ho an'ny mpiara-miasa izahay. izahay dia efa nanana fifandraisana ara-barotra tamim-pirahalahiana niaraka tamin'ny mpanjifa tany Eropa, USA, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Afrika, Moyen Orient ary Azia.
Raisinay an-tsitrapo ny fangatahana rehetra amin'ny fomba fijery avy any an-trano sy any ivelany hiara-hiasa aminay, ary manantena ny fifanarahanay.
Karaoke Soundbar, Wifi Soundbar ho an'ny Tv, Tv Soundbars, Alexa Soundbar, Tendrombohitra Tv And Soundbar, Ireo mpandahateny Soundtro Wifi,